Iindaba -Ihlabathi leRubber elinekhlorini kwingqondo yakho
Ihlabathi leRubber elineklorin kwingqondo yakho
Irabha eneklorin ibhekisa kwimveliso eneklorin yerabha yendalo. Umxube we-trichloride kunye ne-tetrachloride enomxholo we-chlorine wama-65%. Irabha enekhlorini iyahambelana kakuhle nee-resin ze-alkyd ezinokulingana okufanayo kunye ne-polarity ephantsi. Ngokubanzi, ii-alkyd resins eziqulathe ngaphezulu kwe-54% ye-fatty acids zinokuhambelana okungcono kunye nerabha yeklorin kwiziphunga zehydrocarbon ezinamakha. Emva kokungeniswa kwerabha eneklorin, inokuphucula ukomelela, ukubambelela, ukumelana nesinyibilikisi, ukumelana ne-asidi kunye nealkali, ukumelana namanzi, ukunganyangeki kwetyuwa, ukumelana ne-abrasion, njl. Isetyenziswa ikakhulu njengepeyinti yomgangatho wekhonkrithi, ipeyinti yokuqubha kunye nokumakisha kwendlela yokubonisa.
Ukusetyenziswa kwerabha eneklorin
Irabha eneklorin kunqabile ukuba isetyenziswe kwiimveliso ezikhutshiweyo okanye ezibunjiweyo.
Ukusetyenziswa ikakhulu kusekwe kwiimodeli ezahlukeneyo ezinobunzima beemolekyuli ezahlukeneyo okanye i-viscosity. Ifanele ii-inki, iiringi kunye nezinto zokuncamathisela, njl. Njl. Ngokubanzi, i-viscosity ephantsi (i-0.01Pa i-viscosity ephakathi (0.01 ～ 0.03Pa • s) irabha eneklorini isetyenziselwa ukuhombisa; i-viscosity ephezulu (0.1t ～ 0.3Pa Ezona ndawo ziphambili zokufaka isicelo kwipeyinti kukumakisha kwepeyinti, ipeyinti yaselwandle, ipeyinti yesikhongozeli, ipeyinti yoyilo, ipeyinti yedama lokuqubha, ipeyinti yedangatye, njl njl.
Ipeyinti yokumakisha indlela, luhlobo lwesicelo esikhethekileyo serabha eneklorini. Izinto zokutyabeka ezisekwe kwirabha eneklorini ziyanyangeka, zingomi ngokukhawuleza, kwaye zitsale umdla kwiipavumente zekhonkrithi neze-asphalt. Banempawu zokubambelela ezigqwesileyo kwaye banokumelana nefuthe leekhemikhali kunye neerrasives ezisetyenziswa kwimozulu yekhephu kunye nomkhenkce omncinci emhlabeni. E-UK, kucacisiwe ukuba irabha eneklorin kufuneka isetyenziselwe ukumakisha izikhululo zeenqwelo moya.
Ukongeza, ngenxa yomxholo omkhulu we-chlorine, irabha eneklorini ayizukutsha. Ke ngoko, yinto ebalulekileyo ekrwada yokwenza ubungqina bomlilo kunye nepeyinti yokulwa umhlwa. Le peyinti isetyenziswe ngokubanzi kwizityalo zokucoca i-petroleum. Irabha enekhlorini ayisetyenziswanga njengearhente yokwenza ifilimu ezimeleyo, kodwa njengesongezo esiguquliweyo. Isetyenziselwa ukuphucula ukusebenza kwe-chloroprene yerabha, irabha ye-nitrile kunye ne-polyurethane adhesives. Uhlengahlengiso ngerabha eneklorini kunokwenza ezi zinto zincamathelayo zibe bhetyebhetye. I-rubber ye-chlorine yase-US isetyenziselwa ukugqoka. Ipeyinti yokumakisha indlela engama-46%. Amanye amazwe ahlukile. I-60% yepeyinti zerabha ezineklorin zisetyenziselwa ipeyinti yaselwandle. Irabha enekhlorini isetyenziswa ikakhulu kwipeyinti yaselwandle, ipeyinti yokumakisha yendlela, ipeyinti yesikhongozeli, izongezo ze-inki, ukutyabeka itanki ngaphandle, ukutyabeka izakhiwo kunye nezinto zokuncamathelisa eTshayina.
Iimpawu zerabha eneKlorin
Irabha eneklorin ineempawu zokuxhathisa ukwaluphala, ukumelana neasidi, ukumelana nealkali, ukumelana namanzi olwandle, ukungabinakho ukutsha, njl.Ukuncamathelisa okwenziwe ngayo kunokusetyenziselwa ukudibanisa irabha kunye nesinyithi, isikhumba, ukhuni, ilaphu, njl. isetyenziswe njengesiguquli ukuguqula i-chloroprene yerabha ukuphucula amandla okubambisana, ukunyuka kweqondo lokushisa kunye nezinye iipropati. Njengoko amandla okudibanisa ifilimu yokuncamathela kwe-neoprene iphuculwe kakhulu, ukusebenza komxokelelwane kuyaphuculwa. Ukubambelela kwi-PVC enzima kuphantse kube li-10 ngaphezulu kunokubambelela okungasombululwanga.